🥇 ▷ Filimka 'Filimka Rom Ralph wuxuu jabiyay internetka' muuqaal laga soo qaatay 'Avengers: Endgame' bilood ka hor intaan la sii deyn? ✅
Filimka ‘Filimka Rom Ralph wuxuu jabiyay internetka’ muuqaal laga soo qaatay ‘Avengers: Endgame’ bilood ka hor intaan la sii deyn?
Stan Lee’s’so on Ralph Rompe Internet-ka wuxuu qariyey waxyaabaha la yaab leh
Oo haddii aan kuu sheegnay mid ka mid ah kuwa ugu naxariis badan uguna xiisaha badan ee Avengers: Endgame kama muuqdo filimka laftiisa laakiin sawir kale? In ka badan ama ka yar taasi waa wixii ku dhacay xogtii ugu dambeysay ee aan ogaanay ee ku saabsan filimka caanka ah ee Marvel taasna kuma lug yeeleyso waxna kama badna Ralph wuxuu jabiyaa internetka, qaybta labaad ee gudbinta quruxda badan Rompe Ralph.
Cajaladdan waxaan ku raaxeysan karnaa “a yimidWaxaa qoray Stan lee, abuuraha majaajillada ah ee inta badan superheroes-ka adduunka Marvel iyo in uu had iyo jeer u muuqday anecdotally dariiqa filimka UCM. Muuqaalkiisa, waxaan ku arki karnaa horteeda Iron Man iyo gadaasha astaamo muujinaya tirada “3000“. Waxay soconaysaa wax aan ka badnayn ilbidhiqsiyo oo waxaad ku arki kartaa fiidiyaha soo socda (daqiiqaddii 1:48):
Waqtigaas (Ralph Rompe Internetka ayaa la sii daayay 5 bilood kahor Endgame) ma siin muhiimad weyn waqtigaas (wixii ka dambeeya nimcada aragtida Lee sameeyey caruusad) ama shaxanka laftiisa, si kastaba ha noqotee, ka dib markii la arkay filimka Marvel, qof ayaa leh ku dhacay gabagabo yar yaqiinsan: suuragal in lambarkaasi ahaa (oo uu ahaa) tixraac “Waan ku jeclahay 3,000” in gabadha Tony Stark ay u sheegto goob qurux badan oo ka socota Avengers: Endgame.
Tan waxaa lagu caddeeyay koontada Twitter-ka ee Faahfaahinta Filimka, oo si sax ah mas’uul uga ah raadinta ukunta Easter iyo waxyaabaha kale ee qarsoon ee filimada:
Stan Lee wuxuu sameyay sawiro ka danbeeya Ralph Breaks internetka wuxuuna la wadaagayaa Iron Man oo leh ‘3000’ gadaal. Tixraac macquul ah oo ah khadka “Waan ku jeclahay 3000” khadka Avengers Endgame kaas oo la sii deyn doono 5 bilood ka dib. pic.twitter.com/plzQ3fjl2g
– Faahfaahinta Filimka (@moviedetail) Ogosto 9, 2019
Su’aasha ugu weyn ee markan taagan ayaa ah: hal abuurayaasha Ralph Rompe Internet-ka ma ka ogaadeen goobta Avengers: Endgame markii ay abuureen jaangooyadaan mise waa mid ku yimid? Qeybiyaha mas’uul ka ah labada filim waa Disney, markaa waxaa suuragal ah in macluumaadka lala wadaago iyada oo ujeedadu tahay samaynta winkani lama filaanka ah, in kasta oo ay sidoo kale xiiso u leedahay in goobta noocaas ah (oo miisaankeedu ka yar yahay marka loo eego Endgame kale) ay leedahay doorkan halkan – haddii tixraacku tusaale ahaan u noqon lahaa Natiijada Tony Stark, tusaale ahaan, waxay sameyn laheyd macne badan, maadaama la ogyahay inay tahay wax aan Marrintii aan go’aansaday dhowr sano ka hor.
Annagu garan mayno haddii qof kasta oo mas’uul ah lagu dhiirrigaliyo inuu xaqiijiyo ama diido ogaanshahan, laakiin haddii uu ula kac yahay, waxay umuuqataa dhacdo fudud.